Mpanamboatra sy mpamatsy Kts Series - Sina Kts Series Factory
KTS-930 10-inch 10-inch telo-feno feno KTV rafitra mpandahateny fialamboly
Ny mpandahateny KTS-930 dia mandray ny teknolojia Taiwan, izay famolavolana boribory telo làlana, tsy manam-paharoa ny endrika fisehoana ary mampiasa MDF avo lenta izy io arak'ilay fotokevitra akustika. Ny fahatsapana ny ambaratongam-pahefana dia mazava. Ny ampahany matetika dia mpandefa bitsika karazana tandroka, izay madio sy mazava ny feony; ny tariby afovoany matetika misy fehezan-taratasy 4,5-inch dia misy feo midrange mangarahara; ny tarika haavo ambany haavo 10-inch 10-inch dia mandray kôzy vita amin'ny taratasy nohafarana ary mampiasa capacitor avo lenta avo lenta hikirakira ny pa ...
KTS-800 10-inch 10-inch five-five five unit feno feno KTV mpandahateny fialamboly
KTS-800 miaraka amina woofer maivana 10-mirefy maivana ary mpiorina tweeter taratasy 4 × 3-inch, izay manana tanjaka ambany haavo ambany, hatevin'ny fe-potoana feno malefaka ary feon'ny feo malefaka sy malefaka malefaka. Ny aty ivelany dia voatsabo amin'ny hoditra tsy mahazaka akanjo mainty; manana valiny axial sy malefaka sy axia tsy mitovy izy io, fisehoana avant-garde, fefy miaro vy amin'ny harato feno vovoka. Ny mpizara matetika matetika dia afaka manatsara ny valin'ny herinaratra sy ...
KTS-850 10-mirefy telo halavany dimy refy feno KTV mpandahateny fialamboly
KTS-850 dia manana woofer maivana sy haingam-pahefana 10-inch, tweeter taratasy 4 × 3-santimetatra, izay manana tanjaka ambany ambany, hatevin'ny hafanana feno, ary feo malefaka sy malefaka maneho feon'ny feo malefaka. Ny aty ivelany dia voatsabo amin'ny hoditra tsy mahazaka akanjo mainty; manana valiny axial sy malefaka sy axia tsy mitovy izy io, fisehoana avant-garde, fefy miaro vy amin'ny harato feno vovoka. Ny mpizara matetika matetika dia afaka manatsara ny valin'ny herinaratra sy ...